बृक्षारोपण Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperबृक्षारोपण Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
४१ औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा धम्पुसको सिर्जना टोलमा वृक्षारोपण
श्रीभद्र पौडेल, हेमजा, ८ असोज। माछापुच्छे गाउँपालिका–७, धम्पुसको सिर्जना टोल स्थित सामुदायिक वनमा बुधवार वृक्षारोपण गरिएको छ। पोखरा ४ स्थित नेलम्बो नेपालको सहयोगमा वनमा ४१ औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसर पारी वृक्षारोपण गरिएको हो। “सामाजिक क्षेत्रः राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता, समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रुपान्तरण र उद्यमशिलता” भन्ने मुल नाराका साथ दिवसको दोस्रो दिन बुधवार […]
हरि बास्तोला, पोखरा, २३ साउन । लायन्स क्लव अफ शान्ति स्तुपा चौतारीद्धारा आज पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ छोरेपाटनस्थित पुलचोकको सार्वजनिक जग्गामा बृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरियो । हरियाली प्रवद्र्धन गरि वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा चाँप, कपुर, लप्सी लगायत बिभिन्न जातका एक सय ५० वटा विरुवा रोपिएको थियो । लायन्स […]
पोखरा, २२ साउन । विभिन्न संघसंस्थाले वृक्षारोपण गरिने दिवस मनाउने गरे पनि यहाँको एउटा संस्थाले भने गत बर्ष रोपेका विरुवा गोडमेलसंगै संरक्षण गरेर स्थापना दिवस मनाएको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ कास्कीद्धारा सप्ताह व्यापीरुपमा मनाइरहेको वन दिवसका अवसरमा आज पोखरा २७ स्थित पन्थको सामुदायिक वनमा अघिल्लो बर्ष रोपिएका विरुवाको गोडमेल गरिएको हो । सामुदायिक […]
पोखरा चौतारी २३ वर्ष प्रवेशमा
पोखरा, १६ साउन । लायन्स क्लव अफ पोखरा चौतारीले स्थापनाको २३ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार पोखरामा वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । क्लवले पोखरा–१० रामघाट लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा बृहद वृक्षरोपण गरेको कार्यक्रम संयोजक अशोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । क्लवले वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत गरिएको वृक्षरोपण कार्यक्रममा अमला, बर, पिपल, राजवृक्ष, अशोक, गुलमोहर, निम, कल्की फुल लगायतका […]
मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
पाेखरा, १६ साउन । मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहीवार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा भनाई राख्दै प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द बढ्दै गएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए । सर्वोच्च अदालतले […]
लायन्स कैलाश चौतारीद्धारा क्रियापुत्री भवन परिसरमा वृक्षरोपण
पोखरा, १२ साउन । लायन्स क्लब अफ पोखरा कैलाश चौतारीको आयोजनामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ वाटुले चौरमा रहेको क्रियापुत्री भवन परिसरमा आईतबार वृक्षरोपण तथा गोडमेल गरियो । कार्यक्रमको लायन्स क्लब इन्टरनेशनल ३२५ वि १ का डिष्ट्रिक्ट ट्रि प्लान्टेशन डिपार्टमेन चिफ टिकाराम सापकोटाले उद्घाटन गर्दै लायन्स क्लबहरुले आफुले वार्षिक रुपमा गर्दै आएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदैं […]
शिशिर, पोखरा ११ साउन । पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र महेन्द्र गुफा परिषरमा वृक्षारोपण गरिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने हेतुले महेन्द्र गुफा पुर्वाधार निर्माण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पारिजात, कल्की, कपुर, गोदावरी, धुपी लगायतका विभिन्न प्रजातीका एक सय ५० वटा विरुवा रोपिएको समितिका सचिव प्रेम तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन […]
ऋषिराम रानाभाट, लेखनाथ, २९ असार । लायन्स क्लब अफ वेगनास तालनगरीले वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्थापना काल देखिन नै गर्दै आएको वृक्षारोपण कार्यक्रम पोखरा महनागरपालिका वडा नं.३१ किमवेशी स्थित श्री गोरक्ष पिठ शिद्धाश्रममा सोमबार सम्पन्न भएको हो । क्लबका अध्यक्ष शक्ति श्री तिवारी कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा डिष्ट्रिक के चिफ एड्भाइजर […]
पोखरा, १४ असार । जननेता मदनकुमार भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्ती तथा दोस्रो राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसको सन्दर्भमा रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ। कार्यक्रमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी सदस्य एबम गण्डकी प्रदेशका सह इन्चार्ज प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारिले उद्घाटन गरेका थिए। अधिकारिले जननेता मदनकुमार भण्डारीले बिश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाइ नेपालबाट […]